Android app တွေ ဖန်တီးချင်သူတွေအတွက် Basic4Android.2.52.Full - Taikkyithar
Home / Android / Android Tool / Android app တွေ ဖန်တီးချင်သူတွေအတွက် Basic4Android.2.52.Full
Android app တွေ ဖန်တီးချင်သူတွေအတွက် Basic4Android.2.52.Full
1:41 AM Taikkyi Thar
ကဲAndriod သမားများအတွက်အလန်းတကာ့အလန်းဆုံးSoftwareတွေတင်ပေးလိုက်ပီဗျာ.. Android app တွေ ဖန်တီးချင်သူတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့မှာပါ။ဒီSoftwareတွေကတော့ ကွန်ပျူတာက နေ Android app တွေဖန်တီးလို့ရတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ..Full-versionလေးတွေ့ လာလို့ပြန်ဝေမျှပေးလိုက် တာပါ.. Andriod App ရေးချင်သူတွေနဲ့ လေ့လာချင်သူတွေအတွက် အလွန်အသုံးဝင်မှာပါ ..ဒီဆော့ဝဲကိုသုံးရန်လိုအပ်တဲ့ အခြားJava SE Development Kit နှင့် Android SDK.တွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်..JDK အရင်တင် ပြီးတော့ Android SDK တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ..ပြီးမှBasic4Androidတင်ရမှာပါ.. လိုအပ်တဲ့ JDKနှင့် SDK တွေ အတွက် Link တွေလည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..လိုအပ်သလို အသုံးချနိုင်ပါတယ်..install guide
pdf လေးလည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..Andriod App ရေးသားနိုင်ဘို့ အတွက်လည်း http://www.basic4ppc.com/မှာ ဆက်လက်လေ့လာ သွားကြပေါ့ဗျာ.. (Practice Make Perfect ) ..စာဖတ်သူတို.တစုံတရာအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေ..
Java SE Development Kit Download Here (သက်ဆိုင်ရာ Window,Mac OS,Linux)
jdk for window(32bit)
Android SDK ကိုယူပါ..
Download b4a full 3.0 & keygen
Guide pdf>>B4A FirstSteps Guide
ံHow to install B4A& make fullversion>>>First install the program. Then go to the install location - "C:\_Program Files\_Basic4android".There isafile named b4a-gen.exe inside the rar file you have downloaded. Copy this b4a-gen.exe to "C:\_Program Files\_Basic4android" and run it from there. Follow the instruction and make your license as you wish.(licenceတောင်းတဲ့Boxပေါ်လာရင်ကြိုက်တဲ့email ထည့်ပြီးပေးလိုက်ပါ)
ဒီမှာလည်းInstall လုပ်နည်းနှင့် အသုံးပြုနည်းVideo file လေးကြည့်လိုက်ပါ